Agent Aliens dia arcade beat up mahery vaika feno fipoahana | Androidsis
Hitsambikina ary tifiro izay rehetra mihetsika amin'ity arcade space ity antsoina hoe Agent Aliens
Faran'ny herinandro izay ananantsika lalao samihafa tsy navoaka tao amin'ny Google Play Store, fa tena mendrika ny horesahina izy ireo, ka tsy nahatohitra ny fanehoan-kevitra momba ny lalao tsara indrindra sy ny toetra tsara azon'ny olona raisina am-pitiavana aho. Ireo lalao tsy navoaka, araka ny efa nanamarihako ny fotoana na ny hafa, dia manana ny hadisoany sy ny tsy fahombiazany, na dia ny ankamaroan'ny zavatra ezahiko aza dia tonga lafatra amin'ny fidirana amin'ireo trano-maizina ireo, ireo piozila na ireo toerana malalaka ahafahanao mikasa miaraka amina taratasy vorona toy ny Great Wings Paper. Etsy andanin'izay, tadidiko ny horonantsary natao teny nitanisa ahy Lalao video 5 miavaka izay mahazo fanavaozana hatrany ary tsy afaka mamoy tena mihitsy ianao.
Iray amin'ireo tsy navoaka ny Agent Aliens, fitifirana arcade iray izay hahazo fenoy fipoahana ny fakan-tsarinao ary ny karazana tifitra rehetra izay ho avy hatraiza hatraiza. Sehatra arcade izay manana toetra sasany manavaka azy amin'ny lalao hafa ananantsika ao amin'ny Play Store. Agent Aliens dia mampiasa mba hamoronana ekipa mpiady izay hiaraka aminay na aiza na aiza alehantsika hamoaka ny arsenalany manontolo ary hamafana amin'ny fomba tsotra kokoa ireo mpahay siansa sy fahavalo izay ho hitantsika ao amin'ireo galeriana amin'ity lalao futuristic sy habakabaka ity. Hitsambikina ary tifiro ny zava-manan'aina rehetra hitanao tamin'ny dianao tamin'ity lohateny ity izay tonga tamin'ny fahombiazana lehibe ary nantsoina hoe Agent Aliens.
1 Lalao izay miaina amin'ny mahavariana ny fipoahana
2 Mamoha fahaiza-manao ary mamorona ekipa matanjaka indrindra
Lalao izay miaina amin'ny mahavariana ny fipoahana
Tahaka ny teo alohan'ny fampisehoana afomanga, miaraka amin'ny Agent Aliens dia saika hiaina izany isika, fa amin'ny fampiononana izay midika hoe ny fitaovantsika. Tsy maintsy handalo ianao lalantsara feno fahavalo izay tsy maintsy hampiasanao afo mandeha ho azy hisorohana azy ireo sy hanafoanana azy ireo haingana araka izay tratranao. Ny lalao dia mifototra amin'ny sehatra fitifirana madio indrindra izay tokony hahafantaranao ny fomba fikirakirana ny fitsambikinana sy io fomba manokana hifikirana amin'ny rindrina io. Ary koa, azonao atao ny mivezivezy amin'ny alàlan'izy ireo amin'ny fomba arcade madio indrindra.
Eto ny Agent Aliens dia manome ny naoty hamoronana lalao video mihetsika tena tsara ary rehefa mandinika azy ianao dia ho tianao bebe kokoa. Aorian'ny fampianarana ny hetsika sy ny fitsambikinana dia hanana torohevitra mifandraika amin'izany vondrona mpiady izany ianao izay hanatevin-daharana ny fiainanao. Hanana lavaka 3 azonao nofenoina ianao ny mpiady isan-karazany indrindra miaraka amin'ny fanafihana manokana. Afaka manova ny toerany amin'ny ady amin'ny fomba mora ianao, noho izany dia manana teboka stratejika mahaliana izy. Mazava ho azy, ny ady rehetra dia amin'ny fotoana tena izy, koa amboary ny fahaizanao nandresy nandritra ny taona maro.
Mamoha fahaiza-manao ary mamorona ekipa matanjaka indrindra
Ny iray amin'ireo lafiny tsara indrindra amin'ny Agent Aliens dia ny fahaizany, satria manomboka ny ambaratonga ianao dia ho afaka manatsara ny hafainganana, ny fitsambikinana na ny fahaiza-manao hafa izay hananan'ny mpilalao fototra. Tena zava-dehibe tokoa izany hahafahanao misoratra anarana ireo fahafatesana rehetra ilainao hahatratrarana ireo sefo farany, izay iray amin'ny lafiny mahaliana indrindra amin'ity arcade mahery vaika ity.
Hanana ny safidy hidiranao ianao haavo noforonin-tanana amin'ny tanana na mankanesa any amin'ireo infinities izay ahafahanao mahazo vola madinika bebe kokoa handanianao ireo fanavaozana tena ilaina ireo. Lalao izay manome atiny be dia be ary ao anatin'ny dingana "beta" dia tena tsara. Azo lalaovina sy tiana izy io, ka ny sisa ataonao dieny izao dia mandeha amin'ny widget eto ambany ary misintona azy maimaim-poana.
Agent Aliens dia manana haavo teknika nankasitrahana ary hita vetivety amin'ny sary mihetsika, ny tontolo miloko ary ireo mitsambikina izay fantatr'ilay mpihetsiketsika tsara omena. Raha ampianay ny zava-mahatalanjona rehetra momba ny fipoahana, ny fitifirana ary ny fika hafa, dia miatrika arcade mahery vaika misy ora maro mialoha izahay hamenoana ny fiainanao.
Ireo sarimiaina sy malefaka lehibe amin'ny lafiny ankapobeny
Afaka manana namana mpiady bebe kokoa ianao
Bug sasany fa tsy feo hafa
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » Hitsambikina ary tifiro izay rehetra mihetsika amin'ity arcade space ity antsoina hoe Agent Aliens
Nolavin'i Samsung ny fiverenan'ny Gear VR amin'ireo mpampiasa Galaxy Note 7
Fanadihadiana momba ny Huawei Nova Plus, fitaovana iray izay hahagaga anao